Ahmiyada ay leedahay in si fiican guriga hawo loogalo | Bezzia
Muhiimadda ay leedahay hawo siinta guriga si wanaagsan
Pau Heidemeyer | 01/05/2021 16:00 | La cusbooneysiiyay 28/04/2021 16:47 | Guriga
Ha hawo wanaagsan guriga ayaa fure u ah noqoshada guri caafimaad qaba. Miyaad u janjeedhaa inaad hawo qaadatid badanaa? Waa muhiim inaad si joogto ah u sameyso, si loo yareeyo waxyaabaha wasakheeya.
Hawo ku filan oo guryaha ah ayaa awood u leh inay dhaliso kororka bakteeriyada, koror aad u weyn oo ku saabsan walxaha waxyeelada u leh caafimaadka, sida qaybaha qoyaanka, bakteeriyada suuragalka ah ee ka timaada timaha xoolaha, kaarboon monoksaydh, ama kaarboon laba ogsaydh.
Haddii guri uusan hawo wanaagsan lahayn, tani waxay si xun u saameyn kartaa caafimaadka dadka. Calaamadaha kale, madax xanuun, dhibaatooyinka neefsashada ama dhibaatooyinka hurdo la'aanta waa la kordhiyaa, kuwani waa qaar ka mid ah tusaalooyinka cawaaqibta ka dhalan karta hawo la'aanta guriga.
Guri ku yaal hawo ku filan, way dhib yar tahay in la jaangooyo huurka guriga, baabi'inta caarada, qurubyada boodhka, Urka xun ayaa sidoo kale la tirtiri doonaa mahadnaqa shucaaca cusub ee oxygen, waxaad awoodi doontaa inaad kordhiso wareegga hawada.
1 Sidan ayaad ku ogaan doontaa inaad hawo ku filan ku leedahay gurigaaga
2 Kuwani waa faa'iidooyinka ku haynta hawo wanaagsan guriga
3 Kuwani waa cawaaqibta hawo-la'aanta guriga
4 Sidan ayaad guriga ugu heshaa tayo wanaagsan
5 Sidee hawo loo qaboojiyaa
5.1 Hawo dabiici ah
5.2 Hawo gudub
5.3 Hawo qasab ah
5.4 Adeegso marawaxadaha
5.5 Xaddidaadda dadka guriga gudihiisa ku jira
Sidan ayaad ku ogaan doontaa inaad hawo ku filan ku leedahay gurigaaga
Waa muhiim in la fuliyo caadada ah in maalin kasta la sii daayo guriga, mararka qaarkood waxaan aaminsanahay inaan sameyno wax kasta oo suurtagal ah si aan u helno guri caafimaad qaba, si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inaanan wax walba u qabanayn sidii aan u maleynay. Si loo ogaado haddii gurigaagu hawo wanaagsan leeyahay, waxay kugu filnaan doontaa inaad raacdo tilmaamo taxane ah.
Gurigaagu malaha malaha hawo ku filan, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaan ilaawnaa inaan isticmaalno soosaarida jikada ama xaaladaha kale ma lihin wax soo saar musqusha si ay nooga caawiso inaan qolka u neefsano. Haddii aadan haysan marawaxadda qiiqa ee hawada nadiifisa, waa inaad ugu yaraan furtaa daaqadaha laba jeer maalintii.
Dhinaca kale, haddii aad go’aansato inaad sigaar ku cabto guriga gudihiisa, waxay kordhin kartaa isku soo ururinta walxaha sunta ah, taas oo ka dhigaysa caafimaadka dadka wada nool.
Kuwani waa faa'iidooyinka ku haynta hawo wanaagsan guriga
Guriga waa in si hawo leh loo hawo si wareegga hawadu ugu fiicnaado. Si tan ay u dhacdo, waxaa fiican inaad hawo qaadatid subaxa iyo maalin kasta. Maxaa intaa ka badan, isku day inaad gurigaaga ku haysato haddaHaddii aad suurogal tahay, samee qabyo adigoo ka furaya daaqadaha labada jiho.
Kaliya adoo hawo gelinaya 10 daqiiqo maalintii, waxaad ka heli doontaa gurigaaga inuu yeesho faa'iidooyin badan, sida kuwa hoos lagu sharaxay.
Hoos u dhaca xasaasiyadda.
La oxygenation hawada iyo ka saarista kaarboon laba ogsaydhka.
Waad baabi'in doontaa ka ur xun oo hawo laga qaado.
Waad heli doontaa si fiican u naso maxaa yeelay gurigu wuxuu noqon doonaa mid hawo badan oo nadiif ah.
Kuwani waa cawaaqibta hawo-la'aanta guriga
Guriga dhexdiisa, hawo-qaadashada waa in si joogto ah loo kormeeraa si looga fogaado in hawadu aysan neefsan oo ay had iyo jeer ku sii jirto gudaha. Raaxada iyo ladnaanta wada noolaashaha waxay kuxirantahay helitaanka hawo cusub oo cusbooneysiin maalin kasta.
Uumiga la abuuro marka la karinayo, marka la maydhayo, haddii aan isticmaalno kuleyliyaha oo ay weheliso hawo xumo, waxay sababi kartaa in yar oo oksijiin ah, laakiin ma keento waxyeelo caafimaad.
Raaxadaas loogu talagalay kuwa guriga ku nool, waa inay ku sii jirtaa sababtaan, hawo qaadashada waa in si joogto ah loo sameeyaa maalin walbana si xilliyeed ah. Ma lahan guri leh hawo wanaagsan oo ku filan, waxay la xiriirtaa culeyska fekerka iyo xaaladaha neefsashada qaarkood.
Sidan ayaad guriga ugu heshaa tayo wanaagsan
Waa inaan kala saarno dhinac muhiim ah, maaddaama xilliyada jiilaalka, nidaamyada kuleylka loo isticmaali karo si joogto ah waxayna aad u qalalaan deegaanka.
Tan waxaa lagu magdhabi karaa iyadoo la adeegsanayo huuriyeyaal qaarkood. iyo rafcaan qaadashada farsamada hawo qaadashada iskutallaabta dabiiciga ah, ee aan horay u soo sheegnay.
Guri la shaqeeya hawo ku filan sidoo kale bilaha xagaaga, waxa lagu talinayaa waa in la xakameeyo isticmaalka qalabka korontada, waxaad ka fogaanaysaa laydhadhka soo baxa kuleylka badan, Waxaad siisaa alaab adag oo alwaax ah oo waxaad dhigtaa dhir u oggolaaneysa inay go'doomiso kuleylka.
Sidee hawo loo qaboojiyaa
Marka xigta waxaan ku siin doonaa xoogaa fure ah si aad ugu neefsato gurigaaga seddex farsamo oo kala duwan oo aad maanta ku dhaqmi karto.
Hawo dabiici ah
Waa lagama maarmaan in la cusbooneysiiyo hawada iyadoo la furayo daaqadaha iska ilaali uumiga hawo guriga. Waxaa lagu sameeyaa kaliya furitaanka daaqadaha.
Qolalka hawada hawo hawo waxaa muhiim ah in laga saaro qoyaanka soo saaray habeenkii adoo neefsanaya, waad hawo qaadi kartaa ugu yaraan 30 daqiiqo.
Tani waa habka ugu fiican ee loogu talagalay hawo bixinta, waxa ay tahay inaad sameyso waa in laba daaqadood laga furo laba meel oo iska soo horjeedda guriga si hawo gudaha ah loo soo saaro oo cusbooneysiisa oksijiin si dhakhso leh oo hufan.
Hawo qasab ah
Noocan ah hawo qaadasho waa ka duwan yahay maxaa yeelay:
Waxaa loo fuliyaa mahadsanid xubno farsamo.
Waad sameyn kartaa saameynta qiiqa hawo si hawo kulul ay kor u kacdo hawada qabowuna hoos ugu dhacdo.
Adeegso daaqadaha hawo la aanta ahKuwani waa inay oggolaadaan ugu yaraan is-weydaarsiga hawada si loo hubiyo caafimaadka iyo tayada hawada gudaha.
Qaab kale oo hawo loogu nadiifiyo gurigaaga waa iyada oo loo marayo marawaxadaha, taas oo naga caawinaysa inaan hawada ugu wareejino qaab ka fiican. Si loo gaaro hawo qaadashada ugu fiican, waxaad sameyn kartaa talaabooyinkan:
Dhig taageere sida ugu dhow daaqad furan intii suurogal ah, adigoo u jeeda dhinaca daaqadda. Tani waxay u oggolaaneysaa walxaha ku nool gudaha guriga inay si wax ku ool ah uga baxaan.
Ha u tilmaamin taageerayaasha dadka kale, maxaa yeelay taasi waxay sababi kartaa hawo wasakhaysan inay toos ugu socoto iyaga.
Ugu dambeyntii, waxaan kugula talineynaa isticmaal marawaxadaha saqafka kaa caawinaya inaad hagaajiso wareegga hawada ee guriga, iyadoon loo eegin inay daaqaduhu furan yihiin iyo in kale.
Xaddidaadda dadka guriga gudihiisa ku jira
Qaab kale oo hawo loogu fidiyo gurigaaga, ama loo hubiyo in aysan dib uga soo celinaynin waxyaabo badan oo ka mid ah walxaha iyo bakteeriyada aan loo baahnayn, waa in la xaddido tirada dadka isku meel jooga iyo waqti cayiman oo gurigaaga ah. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad raacdo tilmaamahan:
Xaddid tirada dadka soo booqda gurigaaga.
Isu ururi meelaha ugu ballaaran uguna ballaaran, si aad u ilaashan karto masaafada ugu badan ee suurtogalka ah.
Hubso in booqashooyinka ay yihiin kuwa gaagaaban sida ugu macquulsan.
Booqashada kadib, ha ilaawin inaad hawo qaadatid.
Waxaas oo dhami waxay ka caawin doonaan tayada hawada ee gurigaaga inay ahaato mid xasilloon oo ka sarreysa dhammaan, caafimaad qab ah. Ha iloobin inaad guriga hawo ka dhigto subaxa hore ugu yaraan nus saac si aad u neefsato hawo nadiif ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Muhiimadda ay leedahay hawo siinta guriga si wanaagsan
Diyaargarowga jireed ee ugu dambeeya ee lagu ciyaaro teniska suufka
Fikradaha in dib loo isticmaalo dhalooyinka dhalada ah